नेपुगल्सले यूरोपमा नेपाली चलचित्र र म्यूजिक भिडियो निर्माण गर्ने कार्य गर्छ - आर्थिक पाटी
नेपुगल्सले यूरोपमा नेपाली चलचित्र र म्यूजिक भिडियो निर्माण गर्ने कार्य गर्छ
कलाकार तथा सञ्चालक, नेपुगल्स फिल्म्स (पोर्चुगल)
नेपाली कलाकारहरू विदेशिने कुरा कुनै नौलो होइन । कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको केही समयपछि नै के नपुगेर हो अथवा कस्तो सपना पालेर हो, प्रायः कलाकाहरू विदेशिएकै हुन्छन् । विदेशिने कलाकारमध्येमा गंगाबहादुर नेम्कुल पनि एक हुन् । उनी शुरूमा अष्ट्रेलिया पुगे, त्यहाँ करिब ६ वर्ष बसेर बेल्जियम, हल्याण्ड हुँदै हाल पोर्चुगलमा ‘नेपुगल्स फिल्म्स’ नामको आफ्नै व्यावसायिक सांस्कृतिक कम्पनी स्थापना गरेर सार्वजनिक भएका छन् । चिनारी नेपाल अष्ट्रेलियाका संस्थापकसमेत रहिसकेका नेम्कुल हाल पोर्चुगलमा रहेर पनि नेपाली कला संस्कृतिमा इँटा थप्ने कार्यमा लागिपरेका छन् । नारीप्रधान चलचित्र ‘टेम्पो चालक’ निर्माण गरेर नेपालमै चर्चित बनेका उनी सबै कलाकारहरूले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । ललितपुरको सिद्धिपुर– २ घर भएका उनी यूरोपमा कार्यक्रम जुध्नाले समस्या भएको र त्यसको समाधानका लागि वार्षिक क्यालेण्डर नै बनाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउँछन् । वर्षौंको अन्तरालपछि नेपुगल्स फिल्म्सको स्थापनासँगै पुनः सञ्चारमाध्यममा छाएका उनी यूरोपमा नेपाली चलचित्र निर्माण र म्यूजिक भिडयो बनाउन लागिपर्ने बताउँछन् । धेरै समयपश्चात् सांस्कृतिक कम्पनीसँगै पुनः कलाकारित क्षेत्रमा अगाडि बढेका नेम्कुललाई उहाँको मोबाइल नम्बरका आधारमा इमोमा फेला पारियो । उहाँसँग उहाँको कम्पनी नेपुगल्स फिल्म्सको उद्देश्य, व्यावसायिक अवस्था, समग्र यूरोपमा नेपाली कलाकार, कलाकारिताको अवस्थालगायतमा आधारित भएर सामाजिक सञ्जाल इमोमा आर्थिक पाटीका चक्र धमलाले केही कुराकानी गरेका थिए, प्रस्तुत छ, उहाँसँग इमोमा गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
नेपुगल्स फिल्म्स स्थापना गर्नुको उद्देश्य के हो ? यस कम्पनीले केकस्ता कार्यहरू गर्छ ?
यो कम्पनीको मुख्य उद्देश्य भनेकै यूरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना, चलचित्र निर्माण र म्यूजिक भिडियोहरू निर्माण गर्नु हो । साथै, देश विदेशमा रहेका सबै कलाकारहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो । म आफू पनि कलाकार नै भएकाले त्यस्तो सोच आएको हो । क्षमता भएर पनि अवसर नपाउँदा आफूमा भएको कला त्यत्तिकै गुम्स्याएर मनभित्र पाल्न बाध्य भएका धेरै क्षमतावान् व्यक्तिहरू पनि मैले देखेको छु । म त्यस्ता क्षमता भएका प्रवासी नेपाली कलाकारहरूलाई अवसर प्रदान गरेर प्रस्फुटित गराउन चाहन्छु । यो नेपुगल्स फिल्मसको मुख्य उद्देश्य पनि हो । यस कम्पनीले यूरोपका सम्पूर्ण मुलुकमा नेपाली सांगीतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
नेपुगल्स (नेपाल–पोर्चुगल) फिल्म्स एउटा विशुद्ध व्यावसायिक कम्पनी हो । पोर्चुगलमा यस खालको कम्पनी पहिलो पनि हो । यसले चलचित्र बनाउने, म्युजिक भिडियोहरू निर्माण गर्ने काम गर्छ । साथै, यसले यूरोपमा चलचित्र छायांकनका लागि भारत र नेपालबाट आउने टिमलाई आवश्यक सहयोग गर्ने कामसमेत गर्दछ । हाल धेरै नेपाली कलाकारहरू रोजगारीका सिलसिलामा यूरोपमा आइपुगेका छन् । यो कम्पनीले छायांकनका लागि आउने नेपाली र भारतीय चलचित्र कम्पनीका लागि यूरोपमा कलाकार उपलब्ध गराउने, छायांकनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने काम समेत गर्दछ ।
छायांकनका लागि यूरोपमा जाँदा नेपाली छायांकन टोलीले दिनको ३ सय यूरो तिरेर बस्नुपरिरहेको अवस्थामा यो कम्पनीले बजेटअनुसारको बस्ने खाने व्यवस्थासमेत गरेको छ । कम्पनीले ३५ जनासम्म अटाउने क्षमताको एउटा निजी घरलाई भाडामा लिएर कलाकारका लागि बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । रोडको छायांकन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । छायांकनका लागि आउने टोलीलाई नयाँ ठाउँ हुने हुनाले समस्या हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा छायांकनका लागि रोडको अथोरिटी लिइदिने कामसमेत यो कम्पनीले गर्दै आएको छ ।
तपाईं आफू पनि कलाकार, चलचित्र निर्माता, पटकथाकार हुनुहुन्छ, यहाँले कुनकुन चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ ?
मैले सबभन्दा पहिले इमेज च्यानल टेलिभिजनमा प्रसाण भएको नेवारी भाषाको टेलिचलचित्र खोटा बजी’, सोही टेलिभिजनमा प्रसारण हुने ‘समयबजी’, नेपाली चलचित्र ‘टेम्पो चालक’मा अभिनय गरेको छु । नारीप्रधान चलचित्र ‘टेम्पो चालक’को निर्माता र पटकथा लेखक पनि म आफैं हुँ । साथै, यसमा मुख्य पात्रको भूमिकामा पनि म आफैं रहेको छु । त्यसपछि अष्ट्रेलिया बस्दा अष्ट्रेलियन सरकारको लगानीमा निर्माण भएको छोटो चलचित्र ‘नेपाल भाषा’मा पनि अभिनय गरेको छु ।
तपाईं त पत्रकार पनि पो हो रे त ?
पत्रकारिता क्षेत्रमा चाहिँ त्यति लामो अनुभव छैन । अष्ट्रेलिया बस्दा ‘रेडियो जनादेश अष्ट्रेलिया’ का लागि काम गर्न अनुरोध आएकाले केही समय त्यसमा काम गरेको थिएँ । साथै, अष्ट्रेलियाबाटै सञ्चालित अनलाइन पत्रिका ‘द न्यूज क्लब’ मा रिपोर्टरको रूपमा काम गरेको थिएँ । पोर्चुगल आएको १८ महिना भयो । अष्ट्रेलिया छोडेपछि भने कुनै पनि मिडियाका लागि मैले काम गरेको छैन ।
यो कम्पनीले कुन कुन देशमा आफ्नो सांगीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्दछ ? स्थापनापछि कतिवटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ ?
यो कम्पनीले यूरोपका सेञ्जेन मुलुकहरू सबैमा आफ्ना कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने काम गर्छ । यूरोपमा रहेका सम्पूर्ण चलचित्र कर्मी र रङ्गकर्मीहरूलाई समेटेर सांस्कृतिक तथा सांगीतिक कार्यक्रम र चलचित्र निर्माण गर्ने काम गर्छ । यो कम्पनी स्थापना भएको पनि १÷२ महिना मात्र भएको छ । कम्पनी उद्घाटनको अवसर पारेर पोर्चुगलमा यस कम्पनीले भर्खरै बृहत् सांस्कृतिक कार्याक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि नेपालबाट पनि केही चर्चित कलाकारहरूलाई आमन्त्रित गरिएको थियो । यसअघि कलाकार आफैंले व्यक्तिगत रूपमा भिसा एप्लाई गरेर टुरिष्ट भिसामा आउने गरेका थिए । तर, हाम्रो कम्पनीले पोर्चुगलमा नेपुगल्सले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुनकै लागि भनेर सिफारिश गरी, त्यसमाथि म आफैं पनि भारतस्थित पोर्चुगल एम्बेसीमा पुगेर नेपाली कलाकारहरूको भिसाका लागि सिफारिश गरेको थिएँ । यसरी जुन संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रम हो, त्यही कार्यक्रमका लागि जाने भनेर संस्थागत प्रक्रियाबाट नेपाली कलाकारहरू पोर्चुगल आएको यो पहिलो घटना पनि हो ।
नेपुगल फिल्म्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालीहरूको कत्तिको सहभागिता रह्यो ? यसलाई अझ बढाउन केके कार्य गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
नेपुगल्स फिल्म्सले कम्पनी उद्घाटनको अवसरमा गरेको कार्यक्रममा यूरोपमा बसेर रोजगारी गरिरहेका हजारौं नेपालीहरूको सहभागिता रह्यो । यहाँ सबै रोजगार नै रहेको हुँदा बिदाको दिन पारेर कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन त समय मिलेसम्म सबै नेपाली चाहन्छन् । तर, कार्यक्रम जुध्यो भने दर्शक दुईतिर बाँडिन्छ र दुवैतर्फ घाटा हुन जान्छ । यूरोपमा यो ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । यसको समाधानका लागि कार्यक्रमको क्यालेण्डर नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ । प्रायः कार्यक्रम जुध्ने भनेकै चाडपर्वको बेला हो । वर्षभरिका चाडपर्वको बेलामा गरिने कार्यक्रमहरूको क्यालेण्डर बनाउन सकियो भने यो समस्या हट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । एकै दिन एकै देशमा एकभन्दा बढी समूहले कार्यक्रम आयोजना गर्दा समस्या आएको हो ।
विदेशमा आयोजना गरिने सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने नेपाली कलाकारहरूलाई केकस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ ? पारिश्रमिक, भिसा, टिकटलगायतका बारेमा बताइदिनुस् न ?
सुविधा र पारिश्रमिकका बारेमा चाहिँ दुई पक्षबीच जे सम्झौता भएको छ, त्यहीअनुसार नै हुन्छ । विदेशमा आयोजना गरिने साङ्गीतिक कार्यक्रममा नेपुगल्स फिल्म आफैंले आयोजना गरेको कार्यक्रमका लागि आउने कलाकारहरूका लागि भिसा, टिकट, बस्ने खाने सुविधासहित उचित पारिश्रमिकको समेत व्यवस्था गरेको हुन्छ । दुई पक्षबीच कम्पनीले सम्झौता गर्छ र त्यहीअनुसार सुविधा र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँछ । अर्को संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमका लागि यो कम्पनीले नेपाली कलाकार उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेचाहिँ अर्को कम्पनीसँग नेपुगल्सले सम्झौता गर्छ र त्यहीअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।
नेपाली प्रवासीहरूको छाता संगठन एनआरएनको सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ?
मैले एनआरएन पोर्चुगल र उक्त संस्थाका ग्लोबल लेभलका व्यक्तिहरूबाट समेत ठूलो सहयोग र समर्थन पाई नै रहेको छ । हामीले गर्ने सबै कार्यक्रमहरूमा उहाँहरू उपस्थित भएरै हौसला र सल्लाह दिने गर्नुभएको छ । यसमा खुशी लागेको पनि छ ।
अन्त्यमा विदेशमा र स्वदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई केही भन्नु छ कि ?
हामी नेपालीहरूका लागि विदेश जानु रहर नभएर बाध्यता बनेको छ । त्यसो भएकाले स्वदेशमै रहे पनि र विदेशमै रहे पनि आफ्नो ब्याकग्राउण्ड के हो, त्यसैअनुसार अगाडि बढे अवश्य सफलता हात पार्न सकिन्छ । सफलता पाएपछि अरू साथीहरूलाई पनि सम्झिने गरौं । साथै, आफू जन्मेको मातृभूमि नेपाललाई पनि नभूलौं भन्न चाहन्छु ।